နတ်သမီးနာရီ အတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း - JAPO Japanese News
ဂါ 09 Jul 2019, 11:13 မနက်
JAPO Myanmar မှာ နတ်သမီးနာရီ ဆိုတဲ့အစီအစဥ်အတွက် မိန်းမချောလေး အယောက် ၁၄၄၀ ကို ရှာဖွေစုဆောင်းနေပါတယ်။နတ်သမီးနာရီဆိုတာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေက အချိန်ရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုကိုင်ပြီး ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုပြမယ့် နာရီဖြစ်ပါတယ်။တစ်မိနစ်ကိုတစ်ယောက် ပုံလေးတွေပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်လို့ ၁ ရက်မှာ ၂၄ နာရီရဲ့ မိန်းကလေးအယောက် ၁၄၄၀ ကအချိန်နာရီတွေကို အသိပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပုံကိုမြင်တဲ့သူတွေက အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ပုံကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ အဲ့ဒီပုံလေးပေါ်ကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူမရဲ့ Profile Page ထဲ ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးဒီလို Profile Page ထဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့တဲ့ အရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီး ဆုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံတွေကို JAPO ရဲ့ Facebook မှာ မိတ်ဆက်ပေးပြီး Web Page ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ အမြဲတမ်းဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကို ပြသဖို့အခွင့်အရေးပဲနော် !
Page ထဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ခံရသူအများဆုံး ၃ ယောက်ကို အကောင်းဆုံးဆုလက်ဆောင်တွေ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆု – ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းခရီးစဥ်
ဒုတိယဆု – Japan Cosmetic Set
တတိယဆု – အဆင့်မြင့် Hair Salon တွင် အခမဲ့ဆံပင်ပြုပြင်ခွင့်လက်မှတ်
နောက်ပြီး နတ်သမီးနာရီမှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေထဲက အောက်ပါအခွင့်အရေးတွေကိုပါ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
JAPO TV မှာပါဝင်ရိုက်ကူးခြင်း
Idol Group အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်း
JAPO ရဲ့ကိုယ်စားပြုအလှမယ်အနေနဲ့ ထုတ်ဖော်ခြင်း
ဒီအစီအစဥ်မှာပါဝင်မယ်ဆိုရင် အခုချိန်မှာ သာမာန်လူတစ်ယောက်အဖြစ်ရှိနေပေမယ့် ဒီနတ်သမီးနာရီကနေတဆင့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်။
Facebook မှာကိုယ့်ပုံတင်နေကျသူတွေက ဒီအစီအစဥ်မှာ ပါဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလဲ ? ?
မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူ ( နိုင်ငံခြားသားများလည်းပါဝင်နိုင်ပါသည်)
လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာလူမျိုးများ ( တိုကျိုမြို့သို့လာရောက်နိုင်သူများသာ)
အသက်ကန့်သတ်ချက်: အသက် ၁၅ မှ ၄၀ အတွင်း
ပထမဦးဆုံး Japo Myanmar Facebook Page ကို Like လုပ်ထားရပါမယ်။ ယခု Post ကိုလည်း Public နဲ့ Share ပေးရပါမယ်။
Japo Myanmar ရဲ့ Massage Box မှတဆင့် Get Started ကိုနှိပ်ပြီး 1440 Beauties ကိုရွေးခြယ်ပြီး မေးခွန်းတွေကို ဆက်လက်ဖြေကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေကြားရမယ့်အချက်အလက်တွေကတော့
မွေးသက္ကရာဇ် ( ကိန်းဂဏာန်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးရန် )
အလှဓာတ်ပုံ ပို့တဲ့အခါ မျက်နှာကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ Effect တွေအများကြီးသုံးထားတဲ့ပုံတွေသုံးလို့မရပါဘူး။ မျက်နှာသေချာမြင်ရတဲ့ပုံတွေဆိုပိုကောင်းပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်များကို အပြည့်အစုံရေးပြီးပို့ရပါမယ်။ ပေးပို့လာတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီး Japo မှတာဝန်ရှိသူတွေက ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပြီး ရုံးခန်းကိုလာရောက်ဖို့အတွက် ပြန်လည်ပြီးဆက်သွယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါပုံအတိုင်း နတ်သမီးနာရီအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရန် Japo Myanmar ကိုလာရောက်ဖို့ ခေါ်ယူမှာဖြစ်လို့ ပါဝင်ဖို့လျှောက်ထားသူတွေက Japo ရုံးခန်းကိုလာရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးခန်းကတော့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး ၂ နေရာမှာရှိပါတယ်။
လက်ရှိ ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကတော့ တိုကျိုမြို့မှာရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးခန်းမှာလာရောက်ရိုက်ကူးစေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံးတန်းတူဖြစ်စေချင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့သူတွေ ရှက်တတ်တဲ့သူတွေရှိရင် တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့ ခုပဲ ပါဝင်လျှောက်ထားလိုက်ကြစို့နော် ！！
ပါဝင်လျှောက်ထားတဲ့သူတွေအားလုံး တစ်ချိန်မှာနာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အခုကနေစပြီး အချက်အလက်တွေ ပို့လို့ရပြီဖြစ်လို့ နတ်သမီးလောင်းတွေဆီက လျှောက်ထားမှုတွေကို စောင့်မျှော်နေပါမယ်။
နတ်သမီးနာရီကိုတော့ ၈ လပိုင်းမှာ စတင်ဖို့စီစဥ်လျက်ရှိပါတယ်။
နတ်သမီးနာရီမှာ ပါဝင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရုံးခန်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးနောက် JAPO ရဲ့တာဝန်ရှိသူများက တစ်ဖန်ပြန်လည် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နတ်သမီးနာရီ ( 1440 Beauties)
နတ်သမီးနာရီမှာ ရွေးချယ်ခံရရင် ရုံးခန်းမှာဘာလာလုပ်ရမလဲ ?
Japo Myanmar မှဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း
၁၁ လပိုင်းမှာ ဝင်ကြည့်သူအများဆုံးနတ်သမီးလေးများ